Ụdị ụlọ ahịa : Akpa aka, Wallets - Nkwalite (-55%)
Ahịa ụlọ ahịa kacha mma
Ihe eji eme akwa bụ ihe ngwọta dị mma maka ndị na-eji ego na akụ na ụba nke aka ha akpọrọ ihe
N'ịbụ ndị nwere ahụmahụ dị ukwuu n'ịzụ ihe ndị kasị ewu ewu nke uwe, akpụkpọ ụkwụ, eserese, iko na wallets, anyị na-enwe ike izute ihe ụtọ nke ọbụna ndị ahịa kachasị achọsi ike.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na uwe, ihe nkedo nke eserese, akpa, ma ọ bụ ọbụna ịghọ ihe ndị ọzọ na-ewu ewu na ihe ndị a na-egbuke egbuke na-egosipụta àgwà dị elu, mmepụta klas na mmezi nke ndị mbụ. N'ihi nke a, etinyekwala ha n'echiche nke aesthetics, ma ọ bụ n'usoro nke iji ihe ọma mee ihe n'ụzọ ọ bụla na-esi na ngwaahịa ndị e zụtara n'ụlọ nkwakọba ihe ụlọ ahịa ma ọ bụ site n'aka ndị na-emepụta ihe na-ewu ewu na ndị a ma ama.
Anyị bụ ụlọ ahịa nke bụ isi na-enye anyị ụdị uwe, akwa na akpụkpọ ụkwụ na-eyi akwa, ma onyinye anyị dị oke karịa nke a. N'okpuru gị, anyị na-enye ihe dị iche iche dị mma na nke dị elu nke ndị jewelleryand wallets - ha nwere ike ịchọta ha na website https://get2lux.cn/en/
Anya ugogbe anya nke oge a dị iche iche site na nna nna ha nke e ji ... ihe karịrị puku afọ gara aga. Ma ọ dịghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na nzube ha bụ nchebe dị mma pụọ ​​na ụzarị anyanwụ. Ọrụ ọzọ ha bụ ejiji ejiji, bụ nke a na-eji nlezianya na-elekọta nke ụdị ụdị na ugogbe anya maka egbugbere ọnụ nke ndị a ma ama na-emepụta na ụdị ndị a maara na ụwa.
Mgbe ịzụrụ ha, ọ dị mkpa icheta ka ị buru ụzọ tụlee àgwà nke iko ahụ na-echebe, ọ bụghị naanị mmepụta ahụ ma ọ bụ mmecha nke okpokolo agba. Dị ka ihe atụ, a na-enye àgwà dị otú ahụ, dịka ọmụmaatụ, a na-atụ Ray Ban, ụdị oyiri maka ugogbe anya nke dị ugbu a kachasị ewu ewu n'ụwa, ọ bụ ya mere i nwere ike iji yie ọ bụla n'ime anyanwụ ọ bụla siri ike ma ghara ichegbu onwe gị gbasara anya gị. N'otu oge ahụ, ụdị ndị a dị mma nke ọma na ụdị ọdịdị ha, na-alaghachi na okpokoro omenala na iko gbara gburugburu bụ ndị na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke narị afọ gara aga n'ụwa nile.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwugwu ugogbe anya nke Versace, ma ọ bụ ma eleghị anya Glassino, ma ọ bụ ọbụna PORSHE, anyị na - akpọ gị òkù ka ị gaa n'ihu onyinye anyị
Na ileba anya mbu, ịzụta ihe eji aka n'akpa aka yiri ihe na-abaghị uru - ọ bụrụ na ọ bụghị nke mbụ, mgbe ahụ obere akpa adịghị emezu ọrụ ya mara mma ma dị ebube. Ọ dabara na ọ bụ ụzọ na-ezighị ezi n'ụzọ zuru oke, dịka nsụgharị akpaaka Dior n'oge a abụghị ihe dị iche na nke mbụ. Ọ bụrụ na a na-emepụta ya n'ụzọ zuru oke, dị ka nke anyị na-enye, ọdịiche dị na-enweghị ike ọbụna maka anya a zụrụ azụ!
Ya mere, gịnị mere ị ga-eji zụọ ahịa maka ngwaahịa ị nwere ike ịzụta na ọnụ ala dị ala karị, ebe ị na-enwe ụfọdụ nke àgwà ya dị elu ma mara mma? Mgbe ị na-azụ ihe gbasara LOEWE purses, Givenchy ma ọ bụ Celine handbags, ma ọ bụ ịzụta ụdị si ụdị dị ka Balenciaga na Michael Kors ị gaghị akwụ ụgwọ maka ihe ngosi nke onye na-emepụta ihe, ma ị ka nwere ụdị ejiji nke oge a mara na ụlọ ọrụ ejiji. Ihe nkedo nke Louis vuitton ma ọ bụ Gucci akụrụngwa bụ ihe atụ nke ga-emeju ihe ndị na-amasịkarị ndị ọkachamara kachasị mkpa, ndị chọrọ iyi nanị aka na akpaghị aka nke ga-eme ka ha nwee obi ụtọ mgbe ha na-aga n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ mgbe ha na-ezute onye ahịa ahụ. Anyị na-akpọ gị òkù gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị, ebe ị ga - achọta onyinye ahịa zuru oke https://get2lux.cn/en/119-handbags Ọ bụ ezie na ị na-eji efere ndị kpochapụla na-enwe nsogbu karị - karịsịa maka ndị inyom - a ka nwere ọtụtụ ndị na-ekwesị ntụkwasị obi na ọdịnala ha na-eji obere akpa nanị maka ịchekwa ego ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Otú ọ dị, ma ụdị ọhụrụ ọhụrụ na ihe dị iche iche nke obere akpa ego nwere ọrụ dịgasị iche iche, ya bụ, akụkụ pụrụ iche nke ejiri ejide akwụkwọ, iji kwụọ ụgwọ ịkwụsịtụ ma ọ bụ, karịa niile, akwụkwọ. Ngwongwo ndi ozo ohuru bu ihe mmiri na-adighi adighi ozo ma o bu ihe ngbochi, mmebi ma obu mbibi. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ụdị ndị a ma ama na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, oyiri nke obere akpa Christian Louboutin nke akpụkpọ anụ siri ike na-egbochi oge nke oge na ọbụna mgbe ọtụtụ afọ jiri ya, ọ ka dị ka nke ọhụrụ. Otu ihe a na-emetụta ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe bụ ndị natara ọkwa ụwa maka àgwà dị mma nke isiokwu ha. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe nkedo nke obere akpa Givenchy, nke ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ma bụrụ nke zuru okè ọbụna maka ndị ahịa kachasị achọpụta, mgbe ahụ a kpọrọ gị ịga ileta ụlọ ahịa anyị.
Ọ bụ ezie na ị na-eji efere ndị kpochapụla na-enwe nsogbu karị - karịsịa maka ndị inyom - a ka nwere ọtụtụ ndị na-ekwesị ntụkwasị obi na ọdịnala ha na-eji obere akpa nanị maka ịchekwa ego ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Otú ọ dị, ma ụdị ọhụrụ ọhụrụ na ihe dị iche iche nke obere akpa ego nwere ọrụ dịgasị iche iche, ya bụ, akụkụ pụrụ iche nke ejiri ejide akwụkwọ, iji kwụọ ụgwọ ịkwụsịtụ ma ọ bụ, karịa niile, akwụkwọ.
Ngwongwo ndi ozo ohuru bu ihe mmiri na-adighi adighi ozo ma o bu ihe ngbochi, mmebi ma obu mbibi. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ụdị ndị a ma ama na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, oyiri nke obere akpa Christian Louboutin nke akpụkpọ anụ siri ike na-egbochi oge nke oge na ọbụna mgbe ọtụtụ afọ jiri ya, ọ ka dị ka nke ọhụrụ. Otu ihe a na-emetụta ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe bụ ndị natara ọkwa ụwa maka àgwà dị mma nke isiokwu ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe nkedo nke obere akpa Givenchy, nke ga-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ma bụrụ nke zuru okè ọbụna maka ndị ahịa kachasị achọpụta, mgbe ahụ a kpọrọ gị ịga ileta ụlọ ahịa anyị.
Dịka akụkụ nke ejiji kwa ụbọchị, a na-eleghara akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ na-eleghara anya; ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị na-elebara anya ma akpụkpọ ụkwụ ha na-ejikọta uwe, akwa ma ọ bụ ngwa. Site na omume na ahụmahụ, anyị kpebiri ịmepụta onyinye, ebe akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ga-abụ akụkụ dị mkpa nke onyinyo ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị dịnụ, ndị na-emepụta na ndị na-emepụta ga-egbo onye ọ bụla ahịa ma onye ọ bụla ga-achọta ihe maka onwe ya.
Ihe ọ bụla dịnụ nke akpa Converca Coca & Cola, akpụkpọ ụkwụ si Dior, Chanel ma ọ bụ Casadei, na-eme n'ụzọ dị mma ma mara mma, ọ bụghị dị iche na nke mbụ. Ọdịdị nke akpụkpọ ụkwụ adịghị iche na nke mbụ ha, na ogologo oge na nguzogide nke ihe ndị e ji mee ha, na-enye ohere ha na-eji oge ha na enweghị nsogbu. Enweghị ihe dị iche ma ị ga-azụ ihe Prada ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ si ụdị dịka: LV, Christian Louboutin, Gucci ma ọ bụ Yeezy, anyị na-ekwenye na akpụkpọ ụkwụ dị elu na nke ụwa. Ndị a bụ ngwaahịa ahụ, ọ bụghị nanị na ha ga-eji obi ụtọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ, ma karịa nke ahụ, ha ga-enwe obi ụtọ ma dị mma.
Anyị na-akpọ gị òkù ịbịa na ụlọ ahịa anyị ma mara nkọwa nke onyinye https://get2lux.cn/en/113-boots
Otu ilu a maara nke ọma na-ekwu na uwe anaghị eme nwoke ahụ, mana na narị afọ nke 21, ọ bụghịzi n'ezie. Ugbu a uwe ndị na-eyi akwa bụ ihe nnọchianya nke ọnọdụ mmadụ, ọrụ ya, akụnụba ma ọ bụ ọbụna omenala ya. Ogwe osisi na-elekwa anya banyere uwe ha, ha na-ejikwa ụdị uwe dịgasị iche iche dị iche iche na-achọpụta site na mkpokọta kachasị amara n'ụwa.
N'ụlọ ahịa anyị dị na ngwaahịa sitere na ndị kachasị mma, ndị kasị ewu ewu na ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe. Ndị a bụ ndị ọzọ: Giorgio Armani na Burberry oyiri, kamakwa Gucci, Prada na Chanel collections. Onyinye anyị bara ọgaranya na-emesi obi ike, na onye ọ bụla ga-achọta ihe dị n'ime ya, ma n'ihe gbasara ọdịdị ọdịdị - ọdịdị nke uwe, nakwa dị ka ihe gbasara ego, n'ihi na ọnụahịa anyị dị ala karịa nke mbụ. All louis vuitton Louis Vuitton - shirts, shawls, scarves; Valentino - belt, shirts; ma ọ bụ Fendi - ndị a na-eji ajị anụ na ịcha ahụ; na onye ọ bụla ọzọ na-emepụta ihe, nwere nkwekọrịta dị elu a kwadoro na mma, anya mara mma, nkasi obi nke uwe na, karịa nke ahụ, ùgwù nke ihe onwunwe ha.
Ihe eji eme akwa bu ihe di iche iche na akwaghi obi nke uwe gi, n'ihi na ị na-ahọrọ ya dika ngwa maka uwe ga-esi ike. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụ ihe mbụ gbanwere site na windo ụlọ ahịa, ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, oyiri bvlgari ị nwere ike ịzụta n'aka anyị.
Nanị ọdịiche dị n'etiti ọdịdị na ihe ndị ọzọ, nke ị nwere ike ịhụ na elele anya mbụ (na mbido akpa obere akpa gị!), Bụ ụgwọ. Ihe oyiri ejiji si Chanel, Hamis ma ọ bụ Dior nwere ike ịbụ ọbụna ugboro ole dị ọnụ ala karịa nke mbụ, nke na - eme ka ọ bụrụ nke dị mfe karịa maka ndị ahịa. Ịkwesighi iji ụgwọ zuru ezu ịzụta mgbanaka mara mma, nke gosipụtara nanị gị na ụdị gị site n'ebe dị anya.
Kama nke ahụ, naanị ị ga-aga ileta ụlọ ahịa anyị ma họrọ ụdị ihe eji achọ mma nke ị na-achọ ma ọ dị mfe na akpa gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe anyị nwere ike inye na nkowa, ị ga-aga na ụlọ ahịa anyị na https://get2lux.cn/en/121-jewellery Wristwatches bụ mmemme nke siri ike ịkọ. Enwere ike iwere ha dị ka ihe ịchọ mma, ngwa, ma ọ bụ akụkụ nke egwu. Ka o sina dị, ha ka dị ezigbo mkpa ọ bụghị naanị uwe, ma anya ya onwe ya, ọtụtụ ndị ka na-etinyekwa nlezianya anya n'iji ejiji mara mma ma mara mma. Nke ahụ nwere ike ịbụ ma ihe mbụ si n'aka ndị na-emepụta ihe, ma ọ bụ nke a na-emepụta nke a na-ekiri site na Hublot ma ọ bụ Rolex, na-ahụkarị na ụlọ ahịa Polish. Ma, e nwere ajụjụ, gịnị ka ọkachamara ọkachamara ga - agụnye, ihe aha ya na otú o si dị ka nke mbụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ, anyị na-akpọ gị òkù ka anyị gaa na ụlọ ahịa anyị - anyị nwere ọtụtụ nlele elekere site na TAG Heuer mara mma, site na ụdị ụdị dịka Richard Mille ma ọ bụ BREITLING, na U-boat na Emporio Armani. Anyị nwekwara ndị a ma ama n'ihi na ọ ga-adabere na ya, oyiri cartier, na ọtụtụ ndị ọzọ na-ekiri ihe nlereanya nke nkenke nke arụmọrụ na anya zuru ezu. Anyị na-akpọ gị òkù ịlele ụlọ ahịa anyị, mara nke ọma na ịzụta ego na ịhụ onyinye ahụ
Wristwatches bụ mmemme nke siri ike ịkọ. Enwere ike iwere ha dị ka ihe ịchọ mma, ngwa, ma ọ bụ akụkụ nke egwu. Ka o sina dị, ha ka dị ezigbo mkpa ọ bụghị naanị uwe, ma anya ya onwe ya, ọtụtụ ndị ka na-etinyekwa nlezianya anya n'iji ejiji mara mma ma mara mma. Nke ahụ nwere ike ịbụ ma ihe mbụ si n'aka ndị na-emepụta ihe, ma ọ bụ nke a na-emepụta nke a na-ekiri site na Hublot ma ọ bụ Rolex, na-ahụkarị na ụlọ ahịa Polish.
Ma, e nwere ajụjụ, gịnị ka ọkachamara ọkachamara ga - agụnye, ihe aha ya na otú o si dị ka nke mbụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ, anyị na-akpọ gị òkù ka anyị gaa na ụlọ ahịa anyị - anyị nwere ọtụtụ nlele elekere site na TAG Heuer mara mma, site na ụdị ụdị dịka Richard Mille ma ọ bụ BREITLING, na U-boat na Emporio Armani. Anyị nwekwara ndị a ma ama n'ihi na ọ ga-adabere na ya, oyiri cartier, na ọtụtụ ndị ọzọ na-ekiri ihe nlereanya nke nkenke nke arụmọrụ na anya zuru ezu.
Anyị na-akpọ gị òkù ịlele ụlọ ahịa anyị, mara nke ọma na ịzụta ego na ịhụ onyinye ahụ